१८ जना सांसद लिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई महन्थ ठाकुरको वचन - Nepal Samaj
१८ जना सांसद लिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई महन्थ ठाकुरको वचन
१० चैत, २०७७नेपाल समाजमुख्य समाचार, राजनीति
काठमाडौँ । जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता सारथी बन्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा ठाकुरले ओलीलाई सत्ता समीकरणमा साथ दिने वचन दिएका हुन् ।
मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न जसपाका अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला गएका थिए । श्रोतकाअनुसार भेटमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका १८ जना सांसदसहित आफू सत्तामा आउने वचन दिएका छन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले १८ जनालाई नै कुनै नै पद दिने आश्वासन दिएका छन् । जसपमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने ओलीलाई साथ दिन नहुने पक्षमा छन् । तर ठाकुर पक्ष भने पार्टी फुटाएरै भएपनि ओलीलाई साथ दिन लागिपरेका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले १८ मध्ये अधिकांशलाई मन्त्री र बाँकीलाई संसदीय समितिको सभापति तथा अन्य स्थानमा उचित स्थान दिने आश्वासन दिएका छन् । भारतीय डिजाइनमा नै ठाकुर सत्तामा जान लागेका हुन् । किनकी भारतीय खुपिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल आएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गरेपछि अहिलेको राजनीतिक अवस्था सृजना भएको हो ।
ठाकुर त्यही श्रृंखलाअन्तर्गत ओलीलाई साथ दिन लागेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि नेता कर्णले भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफूलाई समर्थन गरिदिन आग्रह गर्नुभएको र आफूहरुका मागकाबारेमा सकारात्मक रहेको बताएको जानकारी दिए । पछिल्लो समय सत्ता समीकरणबारे जसपाभित्र विवाद देखिएको छ ।
गत बिहीबारको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अध्यक्ष यादवले बिनासर्त ओलीको विकल्पमा तीन दलको गठबन्धन सरकार बनाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए । तर बैठक विवादका कारण अनिश्चिकालका लागि स्थगित भएको छ ।
One thought on “१८ जना सांसद लिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई महन्थ ठाकुरको वचन”
Bhagwat simkhada says:
Great news. Welcome to government जासपा